Ngabe izibani ze-lezyne zilungile? - Izibuyekezo
Main > Izibuyekezo > Ukubuyekezwa kokukhanya kweLezyne - incwajana ebanzi
Ukubuyekezwa kokukhanya kweLezyne - incwajana ebanzi
Ngabe izibani ze-lezyne zilungile?
Izibani zikaLezyneezinye zeokuhle kakhuluebhizinisini naseLite Drive 800XL ngesinye isibani esikhazimulayo. Izindlela eziyisishiyagalombili kanye nokukhishwa okuphezulu kwamalambu angama-800 kuqinisekisa ukuthi kukhanya kakhuluukukhanya, okwazi ukukhanyisa imigwaqo engakhanyisi njengekahlenjengokusetshenziselwa ukuhamba ngasedolobheni.24. 2021.
Kunezindlela ezimbalwa ongakhetha kuzo uma kukhulunywa ngokungeza ukukhanya kwebhayisikili ebhayisikili lakho lezintaba. Ngaqala ngamathoshi alula eCree adinga amabhethri aphindwe kabili kuzibambo zami. Ngikuthole ngokushesha lokhu, yize ngathenga ukukhuphuka kweLumina 900 ngumgibeli we-nite ngonyaka odlule, kepha ngemuva kokuyithenga ngithole ukuthi inephethini elincane elincane futhi yize ligcwalise izindawo ezimnyama ekugibeni kwami ​​ekuseni kahle, nginqume bengifuna ukuqhubeka kulo nyaka futhi ngithenge ilambu le-flut manje sengithengile i-lezyne Macro Drive 1300 xxl ngoba zombili izibani zibiza ngaphansi kwamadola ayikhulu kanti phakathi kwamadola ayishumi bengicabanga ukuthi ngizoqhathanisa.
ILazy Macro Drayivu ifike yafakwa kahle ebhokisini lesitoreji seplastiki elisebenzekayo. Ngikwazile ukuthola inguqulo elayishiwe ngentengo efanayo nenguqulo eyisisekelo, ngakho-ke ngithole ezinye izesekeli ezingeziwe kufaka phakathi iswishi yesilawuli kude kanye nezinketho ezimbalwa ezihlukile zokufaka yonke into ibipakishwe kahle futhi ihlelwe kahle futhi ihlelekile nakanjani ngizophinda ngiyisebenzise le phakheji ukuze igcinwe kahle. Isibani uqobo senziwe kahle nge-aluminium eyenziwe ngomshini nenjoloba eyenziwe nge-silicon yebhande lesibambo Lo mkhiqizi ukhangisa amahora ama-2 nemizuzu engama-30 yokusebenza ngamandla amakhulu.
Sizokuhlola lokhu ngoba ngathenga iLumina 900 ngonyaka owedlule, anginalo ibhokisi loqobo futhi angikhumbuli ukuthi yafika neziphi izesekeli. Enginakho manje yibhande lesibambo futhi ukukhanya uqobo kunguK Knight Rider Wenziwe kahle futhi uhlala kahle impela Ngemuva konyaka wokusetshenziswa, umenzi uthi i Knight Rider inehora lokusebenza ngamandla amakhulu futhi ayikhombisi ukulahleka kokusebenza ngemuva unyaka. Sizofika kulokho ngokuhamba kwesikhathi.
I-Knight Rider mount isebenzisa ibhendi yenjoloba lapho iphuzu lokufaka likuvumela ukuthi ususe ukukhanya ngaphandle kokukhipha intaba ngisithanda kakhulu lesi sici. ILezzyne ibuye isebenzise ibhande lenjoloba lokunamathisela, kepha awukwazi ukususa isibani ngaphandle kokukhipha ibhendi. NjengeK Knight Rideri, bekulangazelela ukubona ukuthi amalambu angafanelana yini namandla ashiwo ngumenzi wokusebenza, ngakho-ke ngamisa isitendi sokuhlola, ukubona ukuthi ithoshi ngalinye lizokhanya isikhathi esingakanani ngemuva kokushaja okugcwele.
Nginamalambu womabili ekubekeni okuphezulu kweLumina 900. switched Boost ibonise ukubomvu ngemuva kwehora elilodwa ngehora elilodwa imizuzu eyi-13. Inciphise ukukhipha kwayo ukukhanya futhi yeqa ukusebenza kwayo okumenyezelwe kwehora elilodwa ngemizuzu eyi-13.
Ngemuva kwehora nemizuzu engama-27 iLumina icishiwe, kepha iLezne ibisagijima ngamandla ngemuva kwehora eli-1 imizuzu engama-54 i-lezyne ikhombise ukubomvu kwathi emahoreni ama-2 imizuzu engu-19 ukwakheka kwaqala ukugqama ngokubomvu futhi kwanciphisa ukusebenza kwayo i-lezyne ibingafani nokukhangisiwe isikhathi sokusebenza samahora ama-2 amaminithi we-30 ngamandla amakhulu ekugcineni, i-lezyne igijime elinye ihora kumandla ancishisiwe ngaphambi kokuthi ngivele ngiyicishe. Manje kwenzeka okuthile okuthakazelisayo kimi ngesikhathi sokuhlolwa, iLezyne yaqhubeka yehluleka futhi yangena kwimodi yokonga amandla ngemuva kwemizuzu engaba yisikhombisa, futhi kwangithatha isikhashana ukukuthola kodwa ngathola ukuthi isibani siyashisa futhi singena emandleni aphansi imodi ukuzivikela. Ukuze i-Lezyne ikwazi ukusinda esivivinyweni, bekufanele ngisungule ifeni ukuze izibani zigcine zipholile ukuze zisebenze isikhathi esigcwele.
Lokhu kungaba ukucatshangelwa uma ushayela kancane, mhlawumbe ezindaweni ezishisayo, ngakho-ke kufanele uhambe ngicabanga ukuthi umgibeli weNite wenze umsebenzi ongcono wokuqeda ukushisa yize bekushisa ngaphandle. Ngicabanga ukuthi kungenxa yokuthi ukushisa kukhishwe ngaphandle kwalezo zindawo ezijulile ohlangothini. Ngithenge iLezyne ngqo ukuze ngiyisebenzise njengesikhukhula.
Bengifuna ngempela. ukuvivinya iphethini yesigxobo ngathatha ithuba ekuseni ekuseni ngenkungu ukuqopha i-athikili yokukhanya nephethini yogongolo. Lezi zithombe azizange zivele ngendlela ebengingathanda zenziwe ngayo, ngakho-ke ngasetha indawo yokuhlola egaraji ukuthi isitendi sokuhlola engisimise egalaji lami sasingu-4.5 m kusuka kugqame futhi ngasebenzisa isikwele Ukwenza izilinganiso ze-engeli yokukhanya ngakunye komgibeli wokugcina lapho ushaya khona onqenqemeni lwayo oluhambisanayo ngama-degree angama-25, manje kuma-degree angama-45 akukho ukuvuza okuncane okuvela ezinhlangothini zeNite Rider ngakolunye uhlangothi amaLezne tapers kancane kancane eceleni kokukhanya okungasetshenziswa kahle ngaphezu kwama-degree angama-60 futhi mhlawumbe kuze kufike kuma-degree angama-90.
Engikuthole ekuhlolweni kwami ​​ukuthi kunomehluko omkhulu ekusebenzeni phakathi kwalezi zibani ezimbili ezingamarandi angaba ngu- $ 10 kuphela ngentengo Phakathi kwalezi zibani ezimbili, ngingancoma ilambu leLezyne kuqala njengombani wokuqala webhayisikili ozowusebenzisa izikhukhula futhi mhlawumbe kwenye indawo kamuva ngathenga ngengozi kuqala indawo kodwa manje njengoba senginakho kokubili ngizobe sengizisebenzisa zombili emzileni njengoba senginezikhukhula nendawo lapho ngine-adaptha ye-Bought $ 10 ukuze umshayeli we-nite abeke kuso isigqoko sami sokuvikela ukuthi ubeka lokho kukhanya phansi kancane ngakho-ke bukela kimi ungilandele ungene kulelo kona eliqinile bese ubona ukuthi kukhanyiswa kanjani lapho ngibheka khona nalapho ukukhanya kwebha kuqondiswe khona. Ukugqama kwesigqoko sami sokuzivikela kungeza ukuthi ukugcwala okuncane engikudingayo kulawo makhona abukhali angeziwe ungazise ukuthi usebenzisa ini kumazwana bese ungazisa ngokuhamba kwesikhathi uma ngiphuthelwe noma yini kulokhu kubuyekeza
Ngabe izibani ze-lezyne azinamanzi?
Ngisanda kukhipha lokhu ephaketheni lami, ngiyaxolisa ikhamera yaphuma ngayivula kusenesikhathi ngicabanga ukuthi ngizogijima kodwa noma kunjalo, hey asiphinde sikwenze lokhu, ngivele ngivele, lowo mfana omubi uvule lolu uhla olusha sha ukufaka i-Lezyne 150 ngaphambi kokuthi ngiye eMicrodrive 70 bekukhona lapha umfana ebepholile kodwa bekusezingeni futhi ekuqaleni angazi ukuthi uma ngibheka ibhayisikili lami bese liphelile benginalo cishe iminyaka emibili nohhafu Iminyaka ayikho inkinga esebenza kahle kakhulu eyayiyimodeli yokugcina ephezulu ye-Lezyne micro 70 manje lena eyi-150 esisanda kuyithola, lokhu kunesikhundla esiqonde ngokwengeziwe sendabuko futhi sinezimbili eyodwa ezintathu ezintathu ezine ukubala ama-LED amahlanu okusebenza kancane i-ego angazi noma yiziphi izibani zekati sizozama ukuthi nami ngiyayithanda - leyo ebomvu ngakho uma icishiwe isabukeka njengesibani sebhuleki noma kunjalo ake sivule lo mfana omubi, kufanele ubambe imizuzwana emibili, siqinisile, ngakho-ke lokho kufanele kube amalambu angama-50, azoba ngama-25, lawo kufanele abe mahlanu kuma-run ayisihlanu amahora angu-15, okuthiwa th e 50 bekucishe kube ihora, angazi kahle, kepha lokho kufanele kusebenze amahora ayi-15 bese kubuyela kulokhu okungukucwayiza kokuqala okungamahora amathathu okulandelayo kufanele kube ngu-4 umane nje ukuthathe kancane bese kuba okunye eyodwa lezi ezinye izilungiselelo zokucwayiza zihle lezi zonke zinqunyiwe zihlala cishe amahora amathathu kuya kwayi-4, kepha sifuna ukuthi kube yilokho, yile 150 lapha angiyona impumputhe, uJack, kodwa ukuze ubone ukuthi ikhanya kakhulu, bathi ukusebenza njengezibani zasemini ezigijima ukuze nawe ukwazi ukukwenza lokho Gijimani emini noma ebusuku sizokwenza zombili Isebenza ihora noma ngaphezulu kulokhu kukhanya anginasiqiniseko sokuthi ngidinga yini ukubheka izibalo engizokuzikhiphela lapho kodwa ihora ngalowo yeah ye-Atlanta Le migwaqo engenakho ukukhanya maphakathi nezwe ngikulungele njengoba ubona ukuthi leyo yibhinca, empeleni ulapha kusenesikhathi ukusondela kancane kwalo mfana omubi bese singakwazi hlala ukhipha ishaja le-USB yomfana omubi ubone ukuthi yinhle ipulaki enhle ibukeka kahle ipulaki enhle ukuthi kushaja yakho ye-usb lungela injoloba enhle sket ungatshela ukuthi ayinamanzi iyaphazamisa nansi ukubuka kancane i-mecycling kuzo zonke izilungiselelo ezincane. Khumbula, laba bafana be-bay basindisa izimpilo ngokukhanya bakubeke ngemuva kwebhayisikili lakho
Uyikhokhisa kanjani i-lezyne 400XL?
Icwecwe ngaphambili elishajekayoukukhanya. Okukhanyayo,engenamanzifuthi kulula ukulingana, ilungele ukuqala kwangaphambi kokusa noma ukugibela kosuku lonke ezimweni ezibucayi.
Ngizikhokhisa kanjani izibani zami ze-lezyne?
IyashajaiMini Drive400XLakunakuba lula: akukho ukuklwebheka kwekhebula elilungile, esikhundleni salokho kuxhuma ngqo ethekwini le-USB. Isigqoko senjoloba esingangeni manzi sivele kalula siveze ukuxhumana kwe-USB.
Zenziwa kuphi izibani ze-lezyne?
Kuze kube manje,I-Lezynebazakhela eyabo i-HQ kanye nelebhu yokuhlola eCalifornia futhi bavula ifektri yabo eTaichung idolobha uMicki alithatha 'njengedolobha lamabhayisikili eTaiwan' ngendlela iDetroit eyayiyi 'motor city USA' ngawo-1960.
Ngazi kanjani ukuthi ilambu lami le-lezyne likhokhiswe ngokuphelele?
Ibhethri linjaloishajiwe ngokuphelelelapho luhlaza noma luhlaza okwesibhakabhakaI-LEDiyaqina. Susaukukhanyakusuka kushaja nakumnyango webhethri osemuva ovikelekile. Uma kukhonaukuinkinga ngebhethri, ama-LED abomvu naluhlaza azokwenza kanjaloukukhanyaphezulu. Susa / buyisela ibhethri.21.02.2021
Ukusetha kanjani kabusha ukukhanya kwe-lezyne?
Qala ngeukukhanyaoff bese ucindezela bese ubamba inkinobho amasekhondi ayi-10. I-LED ebomvu nebomvu ohlangothini lwe-ukukhanyaizokhanya lapho isiqediwe. Uma ifektrisetha kabushakuyadingeka, cindezela bese ubamba inkinobho imizuzwana engama-20, kuze kube yilapho ama-LED amakhulu ekhanya ephindelela.02.27.2021
Amathuluzi weLezyne enziwa kuphi?
EzikaLezyneindlunkulu itholakala eReno, Nevada, eU.SA, enezindawo zamahhovisi eSan Luis Obispo, eCalifornia, e-USA, eBerlin, eJalimane naseTaichung, eTaiwan; yonke imikhiqizo yabokwenziwafuthi bahlangana embonini yabo eTaichung, eTaiwan, noma ngokusebenzisana kakhulu nabathengisi abaseduze abakhiqiza izingxenye ezenzelwe kuphela
Uzibiza kanjani izibani ze-LED?
Iphakethe ngalinye lebhethri linokubomvuI-LEDinkombaukukhanyaukukhombisa ukuthi ivuliwe. Xhuma iphakethe lebhethri kushaja, bese uqinisekisa ukuthi ishaja ixhunyiwe odongeni. Kuzothatha amahora ayisishiyagalombili ukuthi ibhethri elingenalutho ligcwaliswe ngokugcweleukukhokhisa, ngakho-ke ngicela uhlele kusengaphambili!
Ngazi kanjani uma ilambu lami le-lezyne likhokhisiwe?
Umaisibani siyashaja, kuzoba nokukhanya okuluhlaza okotshaniukukhanyangenkathi ixhunyiwe (iokuluhlaza kungabukeka kuhlanekezelwe kancane ngelensi ebomvu), noma okubomvu okuqinileukukhanyakwamanye amamodeli we-KTV. Uma ungaboni i-ukukhanya, susaukukhanyakusukaiport, flip it 180 degrees, bese uyifaka kabusha.
Ngabe i-Lezyne Power Drive XL ilambu elikhanyayo lebhayisikili?
Nasi ukubuyekeza kwethu Iyunithi eyizingqabavu kodwa engasindi, ilambu langaphambili leLezyne Power Drive XL liqinile futhi liyakhanya kepha lingenza ngempilo yebhethri elingcono kuzilungiselelo ezigqame kakhulu iLezyne Marco Duo iza njengokukhanya kwebhayisikili langaphambili nangasemuva kuyunithi elilodwa elakhiwe kahle.
I-Lezyne KTV inaluphi uhlobo lokukhanya?
Uhlobo olusha lwe-Lezyne KTV Drayivu isethi inokuningi kokukhiphayo kokuhamba noma ukusebenza kwasemini, ngefomethi ehambisanayo yize kuyinkimbinkimbi ukuyishaja yomabili ngasikhathi sinye Ukukhanya kwangemuva kweLezyne Laser Drive kunemodi ekhanyayo ngokukhishwa kwe-lumen okungama-250 futhi iphrojusa imihlahlandlela emibili ku- indawo yomgwaqo yokubonakala okwengeziwe
Ingabe i-Lezyne strip drive Pro 300 iyisibani esihle?
I-Lezyne Strip Drive Pro 300 ingukukhanya okungathi sína okubonakalayo. Ngokubona kwami ​​kungenzeka ngamamodi ambalwa, futhi uhlelo lokufaka aluhambisani nezimo njengoba kungenzeka. Uma ungathathi okunye kwalokhu njengeziphikisayo, ngiphakamisa ukuthi ukhiphe isikhwama sakho semali.